Umthetho Wezindaba | Law & More
Ukuvikelwa kwamalungelo wobumfihlo kuya ngokuya kubaluleke emphakathini wethu wamanje. Lokhu kungafakwa engxenyeni enkulu yenziwa ukuthi kufakwe kwidijithali, intuthuko lapho imininingwane eminingi ivame ukucubungulwa ngendlela yedijithali. Ngeshwa, i-digitalization ifaka nezingozi. Ukuze uvikele ubumfihlo bethu, kusungulwa izimiso zobumfihlo.
LAW & MORE UNGAKWAZIZA
NGALOKUPHI OKUFANELE UKUXHUMANA NOMTHETHO WESIZO SEZIMI
Imithombo yezindaba ihlanganisa amaphephandaba, ithelevishini, umsakazo kanye ne-inthanethi. Kungenzeka ukuthi wena noma inkampani yakho nibonakale kwabezindaba ngokungazi futhi ngendlela engemihle. Emhlabeni wethu wanamuhla lapho imininingwane yabiwa futhi igcinwe online, lokhu kungagcina ukukuxosha. Ngakho-ke kubalulekile ukuthatha izinyathelo ezifanele uma ubhekene nezinkinga zemidiya.
Umthetho wezindaba ubandakanya imikhakha ehlukene yomthetho. Ukuqashelwa ikakhulukazi kungagxilwa emthethweni we-copyright, umthetho wobumfihlo namalungelo wesithombe. Ekuphenduleni umbuzo wokuthi ingabe incwadi ayikho emthethweni, ilungelo lakho lokuvikela isithunzi nodumo kumele lilinganiswe nelungelo lenkululeko yokubonisa.
Uma kwenzeka kungcoliswa nge-elekthronikhi, kubalulekile ukuthi ubufakazi buqoshwe kahle. Uma kwenzeka kwenzeka i-imeyili engekho emthethweni, kubalulekile ukuthi le imeyili ligcinwe nge-elekthronikhi. Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukuqopha ubufakazi ku-ibwijsonline.nl. Lokhu kuqinisekisa ukuthi unobufakazi obunengqondo.
Law & More ingakusiza kunoma yiluphi udaba oluphathelene nomthetho wemidiya. Abameli bethu bangakweluleka futhi baphendule yonke imibuzo yakho.
Sithanda ukucabanga kokudala futhi sibheka ngalé kwezici zomthetho zesimo. Imayelana nokufika emnyeni wenkinga futhi uyixazulule endabeni enqunyelwe. Ngenxa yokungacabangi kwethu kwengqondo neminyaka yamava, amaklayenti ethu angathembela ekuxhaseni ngokomthetho komuntu siqu nangokufanele.